Ekhaya | Januwari 2022
Leli yiLwandle lapho uGrace Kelly Achithe khona Ehlobo lika-1956
2022 | Ezithunyelwa Paul Adams | Isigaba: Ekhaya
Ngenkathi eqopha i-High Society ehlobo lika-1956, uGrace Kelly wasebenzisa isikhathi sokuphumula phakathi kwezigcawu zakhe eCastle Hill Inn eNewport, eRhode Island. Ngichithe le mpelasonto edlule eCastle Hill — eNewport stop kuVolvo Ocean Race, lapho amaqembu amatilosi (kufaka phakathi iqembu labesifazane kuphela labesifazane) agijima emhlabeni wonke. Emahoreni angekho emsebenzini, lapho sasingekho emzaneni womjaho sihlola izikebhe ezimangazayo, ngangisehostela, lapho ngabona khona ibhishi ledwala elalinezitebhisi zalo ezazizinikele. Kuvele ukuthi, izitebhisi zakhelwa uGrace Kelly ikakhulukazi maphakathi nekhulu lama-20. Isiza sehhotela sichaza ubudlelwane bempahla nomlingisi odumile: Lapho engaphumuli eHarbour House yakhe eCastle Hill, uKelly wayezokwehla angene endaweni enamadwala aze afike emaphethelweni amanzi. Lapho, wayehlala elangeni emadwaleni, abhukude esihlahleni, futhi ajabulele ukuba yedwa ngasogwini lwakhe olufihlekile, lapho abafuna i-autograph bengakwazi ukumphazamisa. Ukukhuphuka, noma kunjalo, kwakungacishe kumnandi; abasebenzi ngokushesha bakha izitebhisi ukuze akwazi ukufinyelela endaweni yakhe yokucasha kalula. Uchithe isikhathi esiningi endaweni enamadwala ukuthi abasebenzi baseCastle Hill nezivakashi basheshe baqala ukubhekisa kuyo njengokuthi
Amabhokisi Wobucwebe Ohamba Phambili Wokwenza Izesekeli Zokuhlela Iphupho
Awuqinisekile ukuthi wenzeni ngeqoqo lakho lezesekeli? Amabhokisi wezinto zokuhloba amahle kakhulu angasiza. Kusukela kumadilowa aqoqekayo kuya ezikhwameni zokuhamba, thenga izixazululo zokugcina eziyi-12.
Ngaphakathi Komshado KaBillionaire WaseRussia: Inkemba-Abaphehli, Ikhekhe Elingamamitha Ayishumi, nengubo engu- $ 600,000
Isicebi sikawoyela saseRussia u-Ilkhom Shokirova washiya ngaphandle izindleko uma kukhulunywa ngomshado wendodakazi yakhe, uMadina Shokirova. Ebanjelwe ehhotela laseMoscow iRadisson Royal Congress Park, kusihlwa bekukhona izivakashi ezingama-900, ikhekhe elingamamitha angu-10 nengubo yamaRandi ayizigidi ezingama-600.
Ama-sandwich angama-30 amnandi ngokumangalisayo ukuze adliwe ngosuku lweSandwich National and Beyond
Siyawathanda amasemishi nsuku zonke kwaGlamour, (Ngidla i-pb & j njengoba ngibhala lokhu), kepha namhlanje sibathanda kakhulu nje ngenxa yeholide elilodwa elibaluleke kakhulu: Usuku lweSandwich Kazwelonke. Ukubungaza, siqoqe ezinye zokupheka zethu esizithandayo, ongazithokozela kusuka kwasekuseni uqonde ngophudingi — bese futhi lapho kushaya izifiso zasebusuku kakhulu. Bheka, kodwa qiniseka ukuthi osebenza nabo abasondele ngokwanele ukuzwa isisu sakho sikhononda. UKUDLULA NGENDLELA YOKUDLULA: AmaSangweji ebhekoni neqanda anama-anyanisi e-Pickled Spring anyanisi i-Frittata Sandwich ene-Olive Salad Leftover Pancake Breakfast Isidlo sasekuseni Isinkwa saseFrance iTurkey Sandwich Smoked Salmon Smørrebrød Prosciutto, Imbuzi Ushizi, ne-Fig Sandwich LUNCH: Isaladi Leqanda Elisikiwe eMini Pitas French Dip Sandwich Arugula, Mozzarella ku-Focaccia Caprese Mini Sandwich Ama-sandwich ama-Pesto Tuna ama-Sandwich ama-Egg isaladi isaladi isaladi le-Nicoise Sandwich DINNER: I-Best-Ever Sloppy Joe BOLT (Bacon, Oyster, Lettuce, Utamatisi) I-Blue Ribbon Barbecue Inkukhu I-Cheeseburgers I-Barbecue I-Turkey Sandwich Isitayela Sase-Asia I-Cheeseburgers I-Chipotle E-Grill Chicken Ama-sandwich e-Ice Cream Nutella nama-Raspberry Sandwich Ama-sandwich ama-sandwich ama-Peanut Ice Cream Sandwich ama-sandwich ama-chocolate afriziwe ama-Gingerbread nama-sandwich ama-sandwich LATE-NIGHT: I-Gridled Mortadella ne-Cheese Cheesy Grilled Pizza Sandwich I-PPB (i-Potato Chip, i-Pickle, ne-Bacon
Iziqhingi Eziyimfihlo Eziyi-7 ZaseCaribbean Uzofuna Ukuzibeka Kuwe
Iziqhingi zaseCaribbean sezivele zizilungiselela ukuhlasela kwabo minyaka yonke kwezivakashi zasebusika. Futhi ngenkathi izindawo ezithile zingalokothi zehluleke ukudonsela abahambi emakhulwini ezinkulungwane, kusenezindawo eziningana ezingaphansi kwe-radar ezinikeza yonke into kusukela enhloko-dolobha enhle kuya ekunyukeni kwamahlathi emvula asezindaweni ezishisayo — konke ngaphandle kokukhungatheka kwesixuku. Unentshisekelo yokuvakashela ibhishi laseCaribbean elizwakala njengelakho ngempela? Qhubeka ufunde. I-Antigua neBarbuda Yize kunamanzi ayo agcwele amanzi, amadolobhana agqamile nezakhiwo ezibuyiselwe emlandweni, isizwe esiyiziqhingi ezimbili sase-Antigua neBarbuda sekudlule isikhathi eside sathola izindawo ezinkudlwana nezithuthukile zaseCaribbean. Lokho kungashintsha maduze: Okuqinisekile ukuheha abahambi abasha, i-V. Isikhumulo sezindiza i-Bird International sisondela ekuphothulweni kufinyelela esigidini samaRandi ayizigidi eziyi-100, ukungezwa kwezikwele ezingama-247,569-square-foot; Insizakalo eqondile kaJetBlue phakathi kweJFK nesiqhingi iqala ngoNovemba 5, kanti umzila ka-Alitalia osuka eMilan uya e-Antigua ulandela ngoDisemba. Futhi emisebenzini? Indawo eyi- $ 250 yezigidi yomlingisi uRobert De Niro. Ongakubona: Bheka-bese ubhukuda nama-stingray endaweni yawo yemvelo eStingray City, bese uthatha izakhiwo zamakoloni kanye nesiteshi semikhumbi saseBrithani esibuyiselwe e-English Harbour, okuyindawo endala kunazo zonke esiqhingini. ISt. Kitts neNevis Kwake kwaba ezinye zeziqhingi 'ezimnandi kakhulu' emhlabeni
Izipho eziyi-11 Zokuthweswa Iziqu Eziphelele Zezimvemvane Zomphakathi
Izipho ezikhethiwe zokuthweswa iziqu ezithanda ukuhlangana nokugubha.
Izinto eziyi-15 ezenzeka lapho uya ekhaya ngamaholide
Akunazinkathazo ngalezo zimo ezikhohlisayo ozohlangabezana nazo — sigubha okuhle, futhi sisiza ngezinkinga.
Ungalifaka Kanjani Iqanda (Vumela uC Curtis Stone Akukhombise)
Ukuzingela iqanda ngenye yalezo zindlela ezilula ezizokuyisa kude empilweni yakho yokupheka uma usulazi kahle. Sebenzisa iqanda eliboshelwe nge-toast njengesidlo sasekuseni esilula, dala isidlo sasemini esisheshayo ngokubeka eyodwa ku-muffin yesiNgisi (nge-avocado, i-parmigiano-reggiano, nosawoti wasolwandle), noma dala izitsha ezahlukahlukene ezidinga eyodwa (njenge-spaghetti carbonara— yum!). Izinyathelo eziyisisekelo zokwazi: 1. Letha amanzi abilayo, bese ufaka izipuni ezimbili zikaviniga (lokhu kusiza amaqanda akhe ukungaguquguquki okufanele). 2. Qhekeza iqanda endishini, bese ulislayida kancane iqanda emanzini ukuze ligcine isimo salo. 3. Yiyeke ibile okwemizuzu embalwa, bese uyisusa ngesipuni. Besingaziqopha sikhombisa ukuthi singalifakela kanjani iqanda, kepha besinomuzwa wokuthi ungathanda ukubuka umpheki we-Aussie uC Curtis Stone akwenze. Ngakho-ke, ngaphandle kokuqhubeka, ungalifaka kanjani iqanda.
Ungenza Kanjani Isofa Elidala Libukeke Lisha
Usofa — ngemuva kombhede wakho — ifenisha ebaluleke kunazo zonke onayo. Yilapho ukhahlela khona izinyawo ngemuva kosuku olude emsebenzini, uzingela umjaho we-Netflix, futhi ubamba umngane wakho lapho endiza eya edolobheni. Kepha ukusetshenziswa kwansuku zonke kuyalimaza futhi ngemuva kweminyaka, usofa ozwakalayo owakheke kahle ungancishiswa ube yisigaxa, namehlo aphelayo. Izindaba ezimnandi ukuthi kungenzeka ungadingi ukulahla isinqamu soshintsho esikhundleni sazo-ngalezi zeluleko, ungasenza sibonakale (cishe) sisha ngaphandle kokwephula ibhange lakho. 1. Faka imicamelo yokuphosa. Uma imicamelo yakho yangemuva ibone izinsuku ezingcono — futhi yake yaba ngcono emhlane wakho — phonsa imicamelo yenza inhloso ekabili: Ayenza abukeke njengamasha — noma okungenani amboze ngokubuka kwakho amakhushini angabukeki, agugile — futhi akunikeze indawo ethokomele phumula. Faka okwanele ukumboza ubude besofa lakho, hhayi amabili kuphela ekhoneni ngalinye. 2. Ipende. Yebo, ufunda lelo lungelo! Kosofa abanamakhushini akhangayo, kwesinye isikhathi ijazi elisha lokupholisa noma upende wendwangu yilokho okudingayo ukuze ukwenze kufane okusha. Ungathola kalula okokufundisa ku-Pinterest okuzokuthatha ngesinyathelo ngasinye osidingayo
Hlangana Nentombazane Eyethukile Ushizi (Okuhlobene: Ayikho Intombazane Esiyaziyo Enalenkinga)
Iningi labasebenzi bethu liwela esigabeni soshizi-aholic. Bengimame ngoshizi isikhathi eside kepha ngisanda kungena kuwo, ngakho-ke amaphesenti ayi-100 ethu ngokusemthethweni aseshizi leqembu. Kepha hhayi le ntombazane empofu. Ngokubika kweDaily Mail, uMelissa North oneminyaka engu-22 wesaba ushizi. `` Ngiyakuzonda ukusondela kule nto, futhi ukubona abantu bekudla kuyesabeka, '' kusho yena. Ezindabeni ezihlobene, sicabanga ngokuqala ikholomu Ushizi Weviki kubhulogi le-Toast, ngakho-ke qaphela lokho. Ngaphandle kokuthi uyiqiniso, unguMelissa North. Uma kunjalo, bheka kude.
Ama-akhawunti we-Instagram ayi-10 Wonke ama-Foodie Okufanele Awalandele
Njengo, oh, wonke umuntu, ngiyazithanda izithombe ezingcolile zobulili ku-Instagram. Ngingumuntu othanda ukuphatha okumnandi, noma yini eshisayo, namaqanda agijimayo ngeSonto ekuseni. Futhi njengomthetho ojwayelekile, i-carbier, iba ngcono. Nazi izinhlobo eziyishumi zokudla engikuthandayo okuvela kubapheki, ama-celebs, nabenzi bokunambitha (ngokoqobo!) Ngokufanayo. Amazambane Amasha, odade uDanielle noLaura Kosann baneso elihle lokuthi yini entsha endaweni yokudla kanye nezakudala zokupheka. Ibhonasi: Okuphakelayo kwabo kungumthombo omuhle wezinhlobonhlobo zezinto ezizokwenzeka kubhulogi. I-Bon Appetit, @bonappetitmag Kalula enye yezinto engizithandayo, i-brand kadadewethu i-Bon Appetit ifaka ingxube ephelele yezithako ezinhle, izitsha ezilahla amathe, futhi, yebo, amaqanda agijimayo. Futhi bheka mini yabo enhle ukuthi-vids nayo kanjani. UDominique Ansel, @dominiqueansel Awusoze wabona uphudingi omangalisa kakhulu kunalowo ozovela kumpheki wekhekhe uDominique Ansel. Nguye lo mfo owasungula i-cronut, ngemuva kwakho konke. (Uhlobo lukaMashi ubisi noju olunoshukela onephunga le-lavender, uma ngabe ubuzibuza.) ULauren Conrad, @laurenconrad KULUNGILE, ngiyazi ukuthi nami ngafaka uLauren kuma-Instagrams amahle kakhulu okufanele awalandele,
Iresiphi ye-Salmon Pizza kaWolfgang Puck (Caviar, Ongakukhetha!) Kusuka eSpago
Ngemuva kokuba yi-chummy nompheki uWolfgang Puck ngesikhathi sama-Oscars (uhlala-ku-Instagrammed ezinye ngemuva kwesigcawu esivela embukisweni wokudla kwethu), sicele uPuck ukuthi ahlanganyele iresiphi yesiginesha endaweni yokudlela yakhe edumile yaseHollywood, iSpago. Okuthile okuthakazelisa ngempela futhi kumnandi, sathi. Nakhu abuye nakho: le pizza edumile ene-salmon ne-caviar ebhemayo, ngezansi. Ngisho ... wow. Akekho othi kufanele usebenzise i-caviar — empeleni, le pizza ibingaba mnandi nje ngaphandle kwayo. Nayi iresiphi engezansi — ungazise uma ugcina ngokubeka i-twist yakho kuyo: I-Pizza Enesalmon Ebhemayo ne-Caviar Pizza Dough: Ikhipha ama-pizza ama-4-intshi angu-8 iphakethe elilodwa elisebenzayo noma imvubelo entsha 1 ithisipuni uju 1 inkomishi yamanzi afudumele (105 kuya kuzidigri eziyi-115) izinkomishi ezi-3 zikafulawa wokudla konke 1 ithisipuni kasawoti wosawoti Kumxube ofakwe ihuku yenhlama, hlanganisa ufulawa nosawoti. Faka uwoyela, ingxube yemvubelo, bese usala inkomishi yamanzi engu-3/4 bese uxuba ngejubane eliphansi kuze kufike inhlama ehlanzekile kude nezinhlangothi zesitsha namaqoqo
Maid of Honor Etiquette Njalo i-Bestie idinga ukwazi
Noma ngabe usuvele uyamukele indima noma uyazi ukuthi isimemo se-MOH siyeza, ochwepheshe bethu banezicucu ezimbalwa zesisebenzi sokuhlonishwa ongeke usiphuthe.
Ungadla Kanjani Kushibhile kwaChipotle Ngoku-oda Imenyu Yezingane
I-chipotle hack: Yonga imali ngoku-oda kusuka kumenyu yengane, okusasebenza ingxenye enhle ngohhafu wezindleko zokudla kwabantu abadala.
Izimpahla Eziyishumi Zesikole Ezizokunikeza Imizwa Ye-Nostalgia
Izimpahla ezivela ngasekupheleni kweminyaka yama-90s nasekuqaleni kuka-00s zazipholile kakhulu esikoleni. Siqoqe izintandokazi zethu eziyishumi, kufaka phakathi ama-trapper keepers kanye nezitika zikaLisa Frank.
I-albhamu Yomshado Wangempela: U-Alexandra noJay
Lo mshado omangalisayo waseNewport, eRhode Island obanjelwe eCastle Hill Inn yi-quintessential New England.
Umqondo Ohlukile Wokuhlanza Indlu: Bamba i-Waffle Brunch
Njengoba mina noSean asikaze sifike ekhaya kakhulu selokhu sathutha ngo-Ephreli, asitholanga isikhathi sokubamba iphathi yokufudumala indlu yethu eyayifanele ngempela. Lapho sesinikeze futhi senza isiqiniseko sokuthi lokho 'kwakuhlala' ebumnandini, sahlela iqembu elifanele futhi sathumela izimemo. Iqembu lethu 'laseWafflowe' elifudumeza indlu lalibukeka njengesihloko esifanele kunazo zonke zokuphila kwethu nokukhombisa ukufudumala kwekhaya lethu elihle. Hlela ukuthi ukudla kube inkanyezi ngoba ngezivakashi ezinhle, ulwazi olufunayo luzolandela nakanjani. Nawa amathiphu ami okuthi ungalwenza kanjani iphathi elimnandi: 1. Misa iziteshi. Kufanele kube nendawo yokubeka isiteji (ikhishi), iziphuzo (eduze kwalapho wonke umuntu ezohlanganyela khona), kanye ne-topping buffet (mhlawumbe lapho wonke umuntu ezohlanganyela khona). Ngaleyo ndlela, ngeke icindezeleke kakhulu futhi izivakashi zakho zingahlangana nezixuku ezahlukahlukene. 2. Funa abasizi. Isidingo samaqanda amasha aqothukile, ubhekeni nama-waffles kwakungokoqobo. Nika umuntu ozimisele ukwenza indoda amaqanda nebhekoni kulo lonke iphathi nomuntu ohlukile ukwenza ama-waffles. Izivakashi zakho zizophinde zifune ukuvakasha — iphathi yokufudumeza indlu ngemuva kwakho konke — ngakho-ke qiniseka ukuthi iyodwa
Izipho Zosuku Lomama Ezi-9 Zomama Zomama Ohleliwe Ngempela
Kumama ozonda imfuhlumfuhlu futhi efisa ukuhleleka nokuhleleka, nakhu ukukhethwa kwezipho Zosuku Lomama.
Izici Ezithembekile ku-Airbnb Edume Kakhulu Emhlabeni
I-Pinterest iyimbobo kanogwaja yokukhuthazwa kokuklama — esizowela phansi kakhulu, ngenxa yalezi zindiza ezinhle (futhi eziphiniwe kakhulu!) Ze-Airbnbs ezivela emhlabeni wonke. Ngayinye ifika iphelele ngokufa-kwezici ezizokushiya uconsa amathe ngomona we-real estate; lezi yizici eziyisikhombisa ezinhle kakhulu ezivela kuma-Airbnbs aphezulu emhlabeni.
I-iPhone Hack: I-Apple Logo Emuva Iyinkinobho
Umsebenzisi we-TikTok uveze ukuthi kungenzeka ukuhlela uhlelo lwe-Apple ngemuva kwe-iPhone ukuthatha isithombe-skrini, ukushintsha ivolumu, noma ukukhiya isikrini sakho.
kungani ukukhishwa kwami ​​kunambitheka usawoti
amabhande ekhanda ekhanda ekhanda
indlela yokusebenzisa i-derma roller ebusweni
melania trump anginandaba nejakhethi